På somaliska: Guriga joog haddii aad xanuusanayso
Sug ugu yaraan laba maalmood ka dib markaad caafimaado ka hor intaanad dib ugu noqon shaqada ama iskoolka.
Dadka gaboobay waxay khatar weyn ugu jiraan inay aad u xanuusadaan. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in iyadoo aan loo baahnayn la booqdo dadka ku jira isbitaal ama hoyga dadka gaboobay. Booqashooyinka noocaas ah iska dhaaf. Adigaaga ka shaqeeya daryeelka dadka gaboobay maaha inaad tagto shaqada haddii aad leedahay qufac ama hargab.
Calaamadaha cudurka covid-19 waa ugu horeyn xummad iyo qufac. Xitaa dhibaato neefsiga ah, cuno xanuun, madax xanuun, xanuun muruqyada iyo laabatooyinka ah waa calaamado caadi u ah. Dadka badankooda dhibtu waxay noqotaa mid khafiif ah taas oo keligeed iskaga dhamaata iyadoo qofku isku daryeelo gurigiisa. Dadka qaarkood si khatar ah ayay u xanuusadaan tusaale ahaan dhibaatooyin in la neefsado iyo barar sambabada ah. Haddii aad dareento mid ka mid ah calaamadahan waa inaad iska dhaafto inaad la kulanto dad kale.
Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka
kala xiriir lambarkan ururka caafimaadka 1177
365TV på YouTube
365TV på Facebook
365TV på Twitter
365TV på Instagram
© 365 TV AB